प्रचण्डद्वारा माधव नेपालसँग पार्टी एकताबारे घोषणा ! प्रचण्ड र माधव दुबै जना अध्यक्ष - nepal day
प्रकासन मिति : २६ पुष २०७८, सोमबार १२:२५
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता हुने संकेत गर्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले माधव नेपालसँग पार्टी एकता हुन सक्ने बताएका हुन् ।
सम्पादकहरुसँग बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘माधव नेपालसँग हामी ढिलो चाँडो एक ठाउमा हुन्छौँ ।’अध्यक्ष प्रचण्डले नेता नेपाल र आफु यसअघि पनि नछुट्टिएको बताएका छन् । उनले अघि भने, ‘हामी ढिलो चाँडो एक ठाउमा हुन्छौँ, यसअघि पनि आफैँ छुट्टिएको होइन।’
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता हुने संकेत गर्दै टिप्पणी गरेका छन् ।राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले माधव नेपालसँग पार्टी एकता हुन सक्ने बताएका हुन् ।
सम्पादकहरुसँग बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘माधव नेपालसँग हामी ढिलो चाँडो एक ठाउमा हुन्छौँ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले नेता नेपाल र आफु यसअघि पनि नछुट्टिएको बताएका छन् । उनले अघि भने, ‘हामी ढिलो चाँडो एक ठाउमा हुन्छौँ, यसअघि पनि आफैँ छुट्टिएको होइन।’
बालकोट वार्ताको भित्री कथा : देउवा–ओलीबीच के कुरा भयो ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालकोटमा भएको दुईपक्षीय वार्ताको यथार्थ अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ । संसदको ‘डेडलक’ खोल्नेदेखि लिएर अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायतका विषयमा देउवा र ओलीबीच वान–टु वान वार्ता भए पनि के–के कुराकानी भयो भन्नेबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले खुलस्त बताएका छैनन् ।
माधव नेपाल पक्षलाई गरिएको कारवाहीबारे सभामुखले सूचना नटाँसेसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने एमालेको अडान र एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनभित्रको मतान्तरको पृष्ठभूमिमा देउवा र ओलीबीच बालकोटमा संवाद भएको हो ।
संसद सञ्चालनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण जनसरोकारका विषयमाथि छलफल हुन सकेको छैन । माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने वा पार्टी विभाजनमा सहयोगी बनेका सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ ।
अर्कोतिर एमालेले आफ्नो माग छोडेर नि:सर्त संसद सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको अडान छ । अदालत पुगेको विषयमा संसद अवरोध गरेर सम्बोधन नहुने सत्ता पक्षको जिकिर छ । तर, एमाले अहिलेसम्म आफ्नो अडानमा टसको मस भएको छैन । एमालेले भदौ २३ यता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
उता, एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ घटककै बीचमा अन्तरविरोध देखिएको छ । एमसीसी पारित गर्न चाहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसमा एमालेको साथ खोजेका छन् ।
ओलीलाई भेट्न त्यसपछि गए देउवा
ओलीको बहिर्गमनपछि असार २९ गते मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले भदौ १५ गते विपक्षीसँग संवाद अगाडि बढाएका थिए । सरकार र प्रतिपक्षीबीचको संवादहीनता एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन कानुनमन्त्री (वर्तमान सञ्चारमन्त्री) ज्ञानेन्द्र कार्कीबीचको छलफलबाट तोडिएको थियो ।
देउवाका विश्वासपात्र कार्कीले भदौ १५ गते दिउँसो साढे ३ बजे एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
त्यसपछि कार्कीले सोही दिन साँझ सात बजे ओलीलाई भक्तपुरस्थित बालकोटको उनकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए । कार्की र ओलीबीच साढे दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो ।
संसद अधिवेशन सञ्चालनदेखि बजेट र एमसीसीसम्मका विषयमा छलफल भएपनि सरकार र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बने बनेन । भदौ २३ गते सबेको संसद बैठकमा एमालेले चर्को नाराबाजी गरेको थियो ।
त्यसपछि सभामुख सापकोटाले २८ भदौमै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । सभामुखको प्रयास असफल भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को‌ अवरोध खुलाउन पहल गरिरहे ।
सभामुखले बैठक बोलाएको तीन दिनपछि भदौ ३१ गते देउवाको सन्देश लिएर फेरि कार्की ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । उक्त छलफलमा पनि संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न ओली तयार भएनन् ।